ခေတ်မှီ မေမေ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ညှစ်ထုတ်ထားသော မေ့မေ့နို့ချို သိမ်းဆည်းနည်း
ယခုခေတ်အခါ မှာ မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက် အပြေးအလွားအလုပ်လုပ်ကြရသည်မို့ နို့တိုက်မိခင်များအတွက် မိအတွက်ရော ကလေးအတွက်ပါ အဆင်ပြေသည့် ခေတ်မှီ နည်းစနစ်များလိုအပ် လာပါသည်၊ အလုပ်လည်းလုပ်ချင် ကလေးကို နို့ဗူးလည်းမတိုက်ချင်သူမိခင်များအတွက် မိမိနို့ကို ညှစ်ကာ သိမ်းဆည်းနည်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်
(၁) မိမိနို့ကို ဘယ်လိုညှစ်မလဲ?
မိမိနို့ကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးနောက် လက်သန့်သန့်ဖြင့် ညှစ်၍ဖြစ်စေ၊ မိခင်နို့ညစ်ပစ္စည်း(breast pump) နှင့် လိုအပ်သောပမာဏကို ကြိုညှစ်ထားပါ။
(၂) မည်သို့ သိမ်းဆည်းရမည်နည်း?
သန့်စင်ထားသော အဖုံးပါသော ဗူး(သို့) ခွက်(သို့) ဇစ်ဆွဲပိတ်နိုင်သော ပလတ်စတစ်အိတ်နေရာပို ဆန့်နိုင်ရန်မှာ ဇစ်ပါသော အိတ်က ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။
ဖော်ပြပါ နို့ အိတ်(သို့) ဗူးများကို ပမာဏ နှင့် ရက်စွဲ တပ်၍ စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါပီ။
ပုံမှန် အခန်းအပူချိန် ( ၂၆ ဒီဂရီ ဆင်တီဂရိတ်အောက်) ဆိုပါက
၆နာရီ မှ ၈နာရီ အထိထားနိုင်သည်
ရေခဲ သေတ္တာတွင် ( ၄ ဒီဂရီ ဆင်တီဂရိတ်အောက် ထားမည် ဆိုပါက)
၇၂နာရီ (သို့) ၃ ရက်ထိထားနိုင်သည်
မိခင်နို့များကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အထက်အောက်လှုပ်ခြင်း ၊ microwaveနှင့် အပူပြန်ပေးခြင်း လုံးဝ မလုပ်သင့်ပါ၊ ရေ ခပ်နွေးနွေးတွင်သာ ခဏ စိမ်၍ သုံးသင့်ပါသည်၊ ရေနွေးစိမ်ပြီးသော နို့ကို မတိုက်ဖြစ်ပါက ရေခဲသေတ္တာထဲ ပြန်ထည့်ခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါ။